महामन्त्री वा उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : डा. महत — SuchanaKendra.Com
महामन्त्री वा उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : डा. महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री वा उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आगामी महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी दिने पक्का भएको तर महामन्त्री र उपसभापतिमध्ये कुन पद टुंगो नभएको बताए । सभापति पदमा शेरबहादुर दाइ आफैं लड्छु भनेकाले सभापति पदमा दाबी छैन । म जाने भनेको महामन्त्री र उपसभापति पदमा हो । म चुनाव लड्ने हो’ उनले भने । यसको औपचारिक घोषणा भने टिम बनेपछि गर्ने डा. महतले बताए ।
‘औपचारिक रुपमा घोषणा कसैको पनि नभएको अवस्थामा मैले पनि नगरेको हो । तर म सहमहामन्त्री भन्दा माथि महामन्त्री अथवा उपसभापति पदमा लड्छु । यसको औपचारिक घोषणा केही समयपछि गर्छु’ उनले भने । नेता महतले आफू पार्टीकै नेतृत्व गर्न योग्य भए पनि अग्रज नेता हुँदाहुँदै अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रो अग्रज दाइहरु हुँदाहुँदै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन । यसले हामीलाई नै घाटा छ भन्ने जान्दाजान्दै पार्टीको परम्परा र संरचनाले र अनुभवले दाइहरुको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ’ उनले भने ।
१४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुर देउवाले नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै उनले उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विचार परिवर्तन गर्न सक्ने बताए । ‘धेरै साथीहरुले विमलेन्द्रजीलाई सल्लाह दिँदा अहिलेको अप्ठेरो अवस्थामा शेरबहादुर जीले एकपटक नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ । …यद्यपि उहाँ (विमलेन्द्र निधि) ले लड्छु भन्नुभएको छ’ डा. महतले भने, ‘तर म के भन्छु भने अहिले नै अन्तिम टुंगो लागिसक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुदैन । नोमिनेसन गर्ने बेलासम्म उहाँले विचार परिर्वतन गर्न सक्नुहुन्छ ।’
उनले नेताहरु विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले गरिरहेको भेटघाटले राम्रो सन्देश नदिएको पनि बताए । पार्टीको संस्थापक नेताका पुत्र यी नेताहरुले गरिरहेको भेटघाटप्रति टिप्पणी गर्दै उनले पार्टी समग्र जनताको छोराछोरीको भएको बताए । ‘उहाँहरुले जसको बुबाहरु नेता हुनुुहुन्थ्यो, त्यसमा मात्रै सीमित भएर पटक पटक बैठक बस्नुभयो । यसले उहाँहरुको लागि सकारात्मक सन्देश दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भने ।